Imiba Imiba yabasetyhini
Kutheni kufuneka i-Viagra ixhalabele abafazi?
Xa abafazi besuka ekuphumeni kwexesha , ukuguqulwa kwama-hormone amava kaninzi kukhokelela ekuhlaleni kwe-libido kunye nomdla omncinane kwisini. Ubume kuthatha inkambo yayo - nje esinye isigaba kumjikelezo wobomi besetyhini. Yindlela esakhelwe ngayo kunye neprogram, ukuthetha ngokwezinto eziphilayo.
Ngoko senzani malunga neViagra kunye nezinye i-ED (ukungasebenzi kwe-erectile) izidakamizwa eziqhelekileyo kwaye zithengiswa ngokuthe ngqo kumadoda kwiintengiso zeTV nakwiimagazini?
Umbuzo obalulekileyo ukucinga ngawo njengoko wonke umntu wesifazane eyazi, kuthatha ezimbini kwi-tango. Impembelelo ye-Viagra kwimpilo yesini yabesilisa nayo ifuthe kwimpilo yesondo yabasetyhini.
UMeika Loe uye wacingisisa lo mbuzo encwadini yakhe, Ukunyuka kweViagra: Indlela iPilisi encinane yeBlue yatshintsha ngayo ubulili eMelika . Kwaye iimpendulo azifumananga ziphazamisayo. Loe, onguNcedisi-ncedisi we-Sociology & Anthropology kunye ne-Women's Studies e-University of Colgate, uye wabhala ngokubanzi malunga nezesondo kunye nabafazi abadala.
ULoe uthethe malunga ne-About.com malunga neViagra (ithengiswa yi-Pfizer) kunye nendlela abesifazana besini abachaphazele ngayo ukuqaliswa kwezi ziyobisi ze-ED.
I-Viagra iyathengiswa kubantu abaguga abahlobo babo besetyhini abajongene neengxaki zabo zesini: ukuyeka umyeni. La mabhinqa afuna isini esincinane kodwa amaqabane abo afuna ngaphezulu.
Ngaba akusiyo le-intuitive? Ngaba oku akuyi kuguqula igumbi lokulala ngexesha elithile xa besetyhafile (umz., I- nest syndrome engenalutho , ukuziva ungathandeki kangangoko sineminyaka yobudala, utshintsho olusisigxina ngenxa yokuphuma kwindoda kuquka ukulahleka kweenwele kunye nokufumana ubunzima, njl.
Ndisandul 'ukuvakashela i-OB / GYN, kwaye emva kokuva malunga nale phando, wazinikela ngokuzithandela ezininzi izigulane zakhe zabafazi zikhalaza ukuba iViagra ayincedi ubomi babo besondo. Ukuqaliswa kwepilisi kuye kwenza ukuziphatha ngokwesini, phakathi kwezinye izinto, ukulala ngesini kunye nokuthotyiswa kancinci.
Siva lo hlobo lwento ngokugqithiseleyo.
Uhlalutyo lwam lwamacandelo eengcebiso emva kokugqibela kwe-Viagra ngo-1998 yabonakalisa iimpendulo ezininzi ezintle phakathi kwabasetyhini. Ngokomzekelo, abafazi ababhala kubathandekayo Abby , abangekho banomdla kwisini (kwaye ngoko iViagra yakha uxinzelelo olutsha olungavumelekanga ukuba luphinde lube ngokwesondo), okanye ukwesaba amadoda abo babenemicimbi kwiimeko zabo zokuqala zesondo, kunye / okanye beva ngezinye iziphumo ezibuhlungu zemizimba yokulawula ubulili babo ubomi emva koko.
Kubonakala sengathi i-Viagra iphakamise imibuzo embalwa kubasetyhini abasetyhini malunga nemithwalo yomtshato, umzekelo. Kwaye kwakhona, kukho ezinye iileta ezibonakalisa injabulo ngabayeni abazive benempilo kwaye banokuzithemba emva kwexesha elingenasiphelo, ngoko ukuphendula kwi-Viagra kubemi kunzima kakhulu.
Kuya kuba kuhle ukubona ukuqhuma kwabantu bekhuluma ngesini emva kokukhululwa kwe-Viagra, kodwa kwipilisi yethu yonke into, sivame ukuvumela ipilisi ukuba yenze umsebenzi kwaye ayikhohlwe ukuba ayiyi kuphela-konke bonke. I-Viagra ixhomekeke ekubeni ikhutshwe okanye iphose iingxaki kwiimeko ezikhoyo.
Kufuneka ukuxelele ukuba ngeli nqanaba, phantse iminyaka eyi-10 emva kokuqala kweViagra, kuphela ama-50% amadoda afumana imimiselo ye-Viagra iphelela ukuzalisa imimiselo yabo.
Akukhona nje ngomntu onokukwazi ukulala ngesondo. Kwakhona ngamandla kunye nokulawula, ubukhulu nangona uguga. Yindlela yokuba amadoda anqabe ukuba aphelile kwinqanaba labo lesondo. Ziziphi iimpembelelo zexesha elide kuluntu ophethe i-Viagra kwi-arsenal yayo?
I-Viagra yi-harbinger yezinto eza kuza kwifom ye-pharmacology yokuguga nokulala ngokwesini (iyeza zentlobano kwimodi yokwandisa emva kwe-Viagra).
Zonke ezi zinto zibangelwa ukudibanisa, phakathi kwezinye izinto, ukuguqula imimandla yabantu (isib. Ukuguga kwabantu), ukuxhomekeka kumthengi / ukuxhomekeka kumthengi (i-Viagra yenye yezilwanyana zokuqala eziza kubhengezwa ngqo kumthengi) kunye nokwandiswa kwemithi .
Kubalulekile ukubona ukuba ukuthandwa kukaViagra kuhambelana nemeko ethile yenkcubeko kwimbali yethu, kwaye kuya kubakho / kubekho ininzi yemveliso ekufuneka ilandele ( kuquka imithi ) egxininisa i-triumvirate engcwele: ulutsha, ubunzima kunye nokusebenza.
Ngamafutshane, njengentlalo-ntsapho, ndibona iViagra njengemveliso yenkcubeko kwaye ngaloo ndlela iwindow kwiziko lethu. Kusinceda sibone ukuba siphi na xa kuziwa ngokwesini (kunye nesimo sethu sengqondo), isini (ubukhulu besintu kunye nokusebenza ngokwesondo okuhlanganiswe ndawonye), unyango (ukulungiswa ngokukhawuleza nokuphila ngokugxininisa ngaphezu kwanini ngaphambili), nokuguga (asinakukhathazeka kodwa ngaba sonke sifuna ukuphinda sibe no-18 kwakhona?).
I-Pfizer incede ekuqiniseni le miqobo yendabuko kunye neyena-yendabuko kunye neViagra kwaye ibangelisekile ukubona indlela abaphumelele ngayo apha kunye neenxa zonke zehlabathi kunye nolutsha, ubunzima, kunye nomyalezo osusela kwimisebenzi.
Kwakhona, ngoku ukuba i-curiosity factor ilahlekile, ayicacanga ukuba imiphumo ephumelelayo yesifo sezesondo iphumelele kangakanani. I-Viagra ivuselele iimveliso ezininzi njenge-Cialis ne-Levitra. Kodwa izinga lokubuyisela kubo bonke abathathu liphantsi.
I-Viagra ngokuqinisekileyo iyingqungquthela yoluntu njengoko ibonakalise iingxaki ezininzi zentlalo ngendlela esenza ngayo impilo kunye nesini kunye nobulili kuluntu lwethu.
Ngaba i-Viagra Use Common in the General Population?
Oku kuchaphazela njani ukuziphatha okanye ukuguqula ubuhlobo besondo kunye nabesifazane?
Kunzima ukufumana ulwazi lwabantu malunga nabasebenzisa iViagra, kodwa kwii-intanethi zengxoxo, kwiiofisi zogqirha, iifommitha, njl njl. Ufumana amadoda abo bonke ubudala abanomdla ekuxoxeni ngezilwanyana.
Sathetha namadoda amancinci athenge iViagr ngaphandle kokungakhuselekanga - "xa kunjalo" imeko apho babeziva befanele baphile kwimilinganiselo yentlalo yabo yokuqala kwaye bathenga iipilisi (okanye baboleke) ukuba baqinisekise ngokwaneleyo ukusebenza.
Sathetha kunye namadoda kuma-80 abo abavakalelwa ngathi banika "ubomi" kwakhona.
UMeika Loe, umbhali we "Ukunyuka kwe-Viagra: Indlela iPilisi encinci yeBlue yatshintsha ngayo ubulili eMelika," iyavuma ukuba i-Viagra nezinye i-ED (i-erectile dysfunction) izidakamizwa zenza uxinzelelo olongezelelweyo kwimpilo yobunzima obunzima bendoda nabafazi. Kwi-intanethi yakhe nge-About.com, naye waphawula indlela ekugxininisa ngayo ukuxhaswa kwezesondo kuluntu lwethu - ukunyaniseka nokunyaniseka ngesondo.
Ukusetyenziswa kwe-Viagra kunomso omnyama.
UJohn Jamelske, indoda eneminyaka engama-67 ubudala eyayibambe iqela labasetyhini abathunjiweyo njengezigqila zezocansi kwisigqeba esingaphansi komhlaba, bathatha iViagra. Iingqungquthela ezimbini zezobisi, uHarold Milman no-SB Arnold, zichaze kwi- Annals ye-Pharmacotherapy ukuba "isicatshulwa siphakamise ukuba sibe negalelo kwiimeko ezingama-22 ezibandakanya ukudlwengula, 13 kunye nokudlwengula, kunye no-6 okubandakanya ukubulala." Ngokucacileyo, iViagra idibene nokudlwengulwa kwabasetyhini.
Ekuhambeni kwophando lwam ndifumanise ukuba uPfizer wadibana neengcali ezimbalwa malunga neengxoxo ezinokuthi zithintele umgca we-Viagra. Ipilisi yesifo sezesondo ingaba yinto enobungozi enkcubeko enomdla kakhulu ngesini-ngokobini kunye nokunyaniseka ngayo ngexesha elifanayo.
Ukuxhaswa kwezesondo ngoko nento esiyizuze kwii-Puritans. Esinye sezizathu zokuziphatha ngokwesini ngokwasemzimbeni kunye nokuphikisana kweli lizwe (sibona oku ngokuphathelele kwimfundo yesondo , ukuthengiswa, ezopolitiko zokuzala, njl.).
E-US sibonakala sichitha ixesha elide kunye nomgudu ngokubhekiselele kwezocansi njengoko sikhuthaza, okwenza abantu abadidekile kakhulu!
Sibona ukudideka kwamagumbi ethu okulala kunye noluntu ngokubanzi, kwaye xa i-Viagra yongezwa kumxube ingabonakalisa imicimbi esinobulili njengentlalo.
Ukuthetha ngesithintelo socansi ... sisisithethe esinoyika ukuthetha ngesondo kunye nabantwana bethu. Ngoko kwenzeka njani ukuba i-Viagra kunye neerhwebo zeziyobisi ze-ED zigijime ngexesha lokuqala kwaye akukho bani omehlo?
Ubungakanani isikhangiso se-Pfizer seTV esikhutshwe emoyeni (apho umntu efumana iimpondo zedemon emva kokuthatha iViagra) kodwa ulungile-kuyo yonke indawo. Okanye bekuyiminyaka emininzi. IViagra. I-Viagra ads ngexesha le-Superbowl - kunye noJanet Jackson bayekezela ukubonisa intsasa xa ngexesha lezorhwebo, iintengiso ezixubusha nge-penises kunye ne-erections, kunye neentengiso zebhiya ezikhuthaza ukuziphatha ngokwesondo njengento ephosa zibonwa zifanelekileyo!
I-Viagra yayisetyenziswe kwisiseko sekhaya xa uPfizer eyona mxhaswa oyintloko we-baseball. Ngoku sibona iLevitra kunye neCialis zipapashwa ngokukhawuleza.
Ibuyela kulo mgaqo wePuritan. Sinyamekele ngesondo kwaye siyancatshiswa yiyo-ngumgca omhle. Ibhokhwe lomfazi wase-Afrika wase-Afrika liwela umgca wabantu abathile. Ubundlobongela kwiimeko zesifo sokungasebenzi (okugqibeleleyo kunye ne-scienceprinting and legitimacy) kubonakala ngathi kudlula.
Xa sibona indlela amadoda kunye nabasetyhini basebenzise ngayo ukungenelela kwemithi, amadoda agxininise ekusebenzeni (i-Viagra) kunye nabasetyhini bajolise ekubonakalayo (Botox). Okanye ngaba ngulo myalelo oqhelekileyo?
Izazi zezenkolo ziza kuthi ezi zixabiso / iimpawu esizifundisayo ngesondo ngasinye sixabisa kakhulu. Amadoda malunga nento abayenzayo, abafazi malunga nendlela ABAKHONA ngayo.
Siya kugxininisa oku njalo kuluntu lwethu (jonga nje kwiintengiso - amadoda ngokuqhelekileyo abonakalisiwe njengabasebenzi, abafazi njengengxenye yomzimba, okanye besaphila, okanye abasondeleyo). Ngaloo ndlela kulandela ukuba ukusebenzisa kwethu iziyobisi kugcina ukuhlukana.
Yintoni onokuthanda ukuyixininisa kubasetyhini babo bonke ubudala malunga neViagra kunye nobulili besini?
Ukuphila kwixesha lemveliso yezobisi lithile libonakala lilula kwaye luncedo kakhulu ukubuyela kumachiza ukuphucula ubomi bethu okanye ukulungisa iingxaki zethu. Nangona kunjalo, asikwazi ukulibala ukuya kuzo, ubudlelwane bethu, kunye nobomi bethu.
Amadoda amaninzi afumene ukuba ngoxa iViagra inokubanceda ekuziphatheni ngokwasemzimbeni (nangona kwabaninzi abazange basebenze okanye bafike kwizinto ezinobungozi becala), kwakungekho isisombululo kwisigxina sobuntu okanye ukwaneliseka komntu. Kwezinye iimeko, kunzima ukuxhathisa imibandela ekhoyo kwimibutho yabantu okanye ingqondo.
Amadoda nabasetyhini bayinkimbinkimbi kwaye bahlukeneyo ngokumalunga nobulili kunye jikelele. Izixazululo ezilula ziphela ngokugqithiseleyo - kwaye zisenzele ukuxhaswa kwinkqubo.
I-Dalai Lama - "Ihlabathi Liza Kulondolozwa Ngumfazi waseNtshona"
Iikholeji ezili-10 zeekholeji ze-Women's Freshman
IQela leMhlaba uMike Powell's I-Step-by-Step Long Tips Tips
Indlu yezilwanyana - Itheyibhile yemihla kunye neendawo
UMgangatho weMigangatho Ukuqhathaniswa nokwamkelwa kwiiKholeji zase-Illinois
Uqoqo lwezithombe zikaMongameli Franklin D. Roosevelt
Indlela ukuKhanya kweFart kusebenza ngayo